I-Beijing ibeka izihlalo zobukhosi kwisiXeko saseNew York njenge-Billionaire Capital yeHlabathi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase China eziQhekezayo » I-Beijing ibeka izihlalo zobukhosi kwisiXeko saseNew York njenge-Billionaire Capital yeHlabathi
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase China eziQhekezayo • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ubutyebi behlabathi obucekeceke buye baba sisityebi nangaphezulu kulo nyaka uphelileyo ngaphandle kokubhubha kwe-COVID-19 kunye noqoqosho
Idolophu enkulu yaseTshayina iba yindawo entsha yezigidigidi
I-Beijing ifumene i-33 yezigidigidi kwi-2020, izisa i-100 yayo
Iidolophu ezintlanu zaseTshayina zibekwe phakathi kwe-10 ephezulu kwihlabathi liphela kunye neebhiliyoni
Ngokwe-Forbes yoluhlu lwee-Billionaires zehlabathi zonyaka ka-2021, okwesihlandlo sokuqala ukuba iBeijing ibe yindawo entsha yezigidigidi.
Idolophu enkulu yase China ifumene i-33 yezigidigidi ngonyaka ka-2020, isizisa ku-100. Ngokwenza njalo, iBeijing yabetha iSixeko saseNew York ukuba iBig Apple yongeze iibhilionea ezintsha ezisixhenxe ngexesha elinye kwaye ibinabahlali abangama-99 ezigidi ngo-2020.
"I-China yabuya ngokukhawuleza kwimeko yayo yobhubhane, inyuka isuka ku-No. 4 ukuya ku-1 kuluhlu lwethu lonyaka," utshilo uForbes.
Ngokubanzi, izixeko ezihlanu zaseTshayina zibekwe phakathi kwe-10 ephezulu kwihlabathi liphela kunye neebhiliyoni. Hong Kong yayikwindawo yesithathu ngeebhiliyoni ezingama-80, iShenzhen kwindawo yesihlanu ngama-68, iShanghai kwindawo yesithandathu ngama-64.
Inkunzi yase-UK, London, ikwabalwa njengabahlali abangamawaka ezigidi ezisixhenxe, nangona yehla ukusuka kwindawo yesihlanu yaya kweyesixhenxe "njengelona khaya laziwa kakhulu ngobutyebi." Ukujikeleza i-10 ephezulu, iMoscow yehla ukusuka kwindawo yesithathu ukuya kweyesine, ngelixa iMumbai neSan Francisco-ikhaya ngalinye liziibhiliyoni ezingama-48-ziboshwe kwindawo yesi-8.
Ngokwengxelo, umntu osisityebi osandula ukufika eBeijing uneminyaka engama-34 ubudala uWang Ning, oneshishini lakhe lokudlala elidumileyo uPop Mart waya esidlangalaleni eHong Kong ngoDisemba ka-2020. “UZhang Yiming, osisityebi osisityebi waseBeijing kunye nomsunguli we-media media sensation TikTok, wayiphinda kabini umnatha wakhe ezixabisa iidola ezingama-35.6 zeebhiliyoni. ”
Ubutyebi behlabathi obunobutyebi obuninzi buye baba nobutyebi kulo nyaka uphelileyo ngaphandle kokudodobala kwe-COVID-19 kunye noqoqosho, utshilo uForbes. Ehlabathini lonke, abantu abangama-660 baba ngoozigidigidi abatsha, nto leyo ibangele ukuba umhlaba ube zizigidi ezi-2,755 ezixabisa iidola ezili-13.1 zezigidi.